ERW (Electro-emegide welded) Pipe Line - China Qingdao Haokun Machinery
ERW (Electro-emegide welded) Pipe Line N'ihi ngwa ngwa mmepe na China, e nwere a elu ina maka ezi mma, nnukwu dayameta ERW akpa maka mmanụ & gas ụgbọ njem, mmiri & Sewerage njem na obodo na-ewu ụlọ ọrụ. Iji mezuo ihe chọrọ nke anyị na ndị ahịa, anyị nwere onwe anyị patented HAOKUN ERW tube mmepụta akara. TO na-ụbọchị, anyị na-ọnọ nnukwu dayameta ERW16 ', ERW 20 ", ERW 24" ka anyị dị iche iche ahịa. Anyị na ka a mata a ikpe ebe anyị ...
Dị ka a n'ihi nke ngwa ngwa mmepe na China, e nwere a elu ina maka ezi mma, nnukwu dayameta ERW akpa maka mmanụ & gas ụgbọ njem, mmiri & Sewerage njem na obodo na-ewu ụlọ ọrụ. Iji mezuo ihe chọrọ nke anyị na ndị ahịa, anyị nwere onwe anyị patented HAOKUN ERW tube mmepụta akara. TO na-ụbọchị, anyị na-ọnọ nnukwu dayameta ERW16 ', ERW 20 ", ERW 24" ka anyị dị iche iche ahịa. Anyị na ka a mata a ikpe ebe anyị na-ọnọ a ERW 25 "tube Mill ka Guangzhou Juyi Pipe Factory. Na nke a Mill, anyị na-e a kwụ Loop Accumulator, a elu na-agba eriri igwe Edge igwe na a efe Curter aka ya ike. Ọzọ ERW 25 "tube Mill na-ugbu a na-enye anyị ka anyị Mozambique WBHO Company. Tụkwasị na nke a kwuru, anyị na-gbakọtara research data maka ERW 630 X 19,1 mm ígwè ọkwa X80 anyị imewe n'ọbá akwụkwọ. Anyị pụrụ iji obi ike na-ekwu na anyị nwetaworo ala -of-nkà ike maka nnukwu dayameta ERW tube Mill.
Ịgbaso ngwa ngwa uto nke Chinese aku na uba, na elu-ọkwa, nnukwu dayameta na elu ugboro ogologo onuete welded ọkpọkọ na-ọtụtụ-eji ebe dị ka mmanụ ala na njem, n'obodo ukwu pipeline netwọk na rụrụ, pushing elu ina ha, nke na-emepụta ọhụrụ mmepe ohere anwụrụ akara n'ichepụta sịrị na ngwá Nsukka.
N'oge na-adịbeghị anya, site na ha ịmụta ma na-amịrị elu ERW igwe teknụzụ si mba ọzọ, anyị na e mere na mepụtara nnukwu dayameta ERW mmepụta edoghi na anyị onwe anyị ikike arịa amamihe. Karịsịa ụfọdụ otu nkeji, dị ka piakota ala, e patented na China. N'ihi ya, anya, anyị na-okokụre emebe nnukwu caliber ERW mmepụta edoghi na nkọwa: 16 "ERW, 20" ERW, 24 "ERW. N'etiti ndị na 20 "ERW, 24" ERW mmepụta mills nọ na-ama etinyere n'olu; N'ihi Guangzhou Juyi Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd, ọzọ zuru ezu set nke 25 "ERW mmepụta akara na kwụ akaghị. High Speed ​​Edge igwe Machine na-akwọ osisi. Ịcha Machine na gụchara Area ama ọrụ; a zuru set nke 25'ERW akara ka exported ka WBHO na South Africa bụ ugbua n'okpuru ule.
Ke adianade do, anyị ụlọ ọrụ emewo mụtara niile usoro maka ERW630x19.1mm na ígwè ọkwa X80, na azụlitewo JCOE1420x32mm na ígwè ọkwa X80 welded anwụrụ mmepụta akara.
Warara ígwè nkwadebe nke
Uncoiling : abụọ na-akwọ ụgbọala ịgbasa akụ na ọrụ nke erughị ala akara na kwụ ukpụhọde nke warara ígwè
Iyipu ígwè abadaba igwe : With 5 arụ ọrụ na-apụta meghere / emechi ngwa ngwa site haịdrọlik cylinder.
Ịgbado ọkụ usoro nke efere na isi na ọdụ agwụ : Mag ịgbado ọkụ, CO2 gas ọta.
Kwụ ịgbado ọkụ igwe imewe : jikọtara ọnwụ na ịgbado ọkụ ọnụ.
N'ọnọdu nke warara ígwè tupu ịgbado ọkụ : akpaghị tụọ na mmezi ọnọdụ nke warara ígwè.
Gburugburu accumulator : n'èzí na ntughari
Warara nri ọsọ : Oke 75m / min.
Elu nke Rolling akara : About 1000mm n'elu mmiri
Production mode : na-aga n'ihu mmepụta
Speed nke mmepụta akara : 12m / min ~ 25m / min.
Mbanye ụdị isi etiti : Onye ọ bụla mpịakọta a na iche iche chụpụrụ site CNC AC agbanwe ugboro njikwa ọsọ ma ọ bụ na DC njikwa ọsọ
Akpụ echiche : Idozi na Rolling akara, ala na-akpụ usoro
Elu nke center akara : About 1000mm n'elu mmiri (sizing ngalaba)
Ụdị -akpụ : onu akpụ
Mwube nke inyefe na nkume igwe nri : PLC-achịkwa ngwa ọnọdụ usoro na ntuziaka amanye ọnọdụ
Ukpụhọde nkume igwe na-apụta : PLC-achịkwa akpaka ukpụhọde na ntuziaka ukpụhọde.
Ne burr scraping : Ne burr na-hapụrụ site na iji mgbanaka mma arụnyere pụrụ iche ngwá ọrụ ike.
Elu burr scraping : Abụọ scrapers elu burr na otu crimpers elu burr.
S izing nke anwụrụ : Anọ sizing ila na-eji na-amị okirikiri ọjà.
Steel anwụrụ hulite : Meenụ ígwè anwụrụ site toki isi na sizing na nkume igwe nri.
Ọnọdụ nke na-efe efe hụrụ : CNC ugboro abụọ na nkume igwe nri ọnwụ isi ụgbọelu eme njem bee-nke igwe.
Osote: Gburugburu Pipe Mill
30inch longitudinal submerged Arc welded Steel Pipe Mill
30longitudinal submerged Arc welded Steel Pipe Mill
762 longitudinal submerged Arc welded Steel Pipe Mill
Advanced Weld onuete Okpomọkụ Ọgwụgwọ
Erw Pipe akpụ Machine
Erw Pipe Ime Machine
Erw Pipe Mill rụpụta
Erw tube Ụgha Mill
kpaliri tube Ime Machine
High Frequency Inducion ịgbado ọkụ Pipe Mill
High Frequency itinye n'ọkwa ịgbado ọkụ
High Frequency ịgbado ọkụ Pipe Mill
Joint-isi ịgbado ọkụ Machine
Longitudinal submerged Arc ịgbado ọkụ Pipe Machine
Longitudinal submerged Arc ịgbado ọkụ Pipe Mill
Od & I.D. Weld Kpaa
Pipe Machine Ime
Pipe ịgbado ọkụ Machine
SS Pipe Ime Machine
Tak-Final welded Pipe Mill
Tak-Final welded Pipe Mill 100
Tak-Final welded Pipe Mill 100 Inch
Tak-Final welded Pipe Mill 1422
Tak-Final welded Pipe Mill 1620
Tak-Final welded Pipe Mill 1820
Tak-Final welded Pipe Mill 2032
Tak-Final welded Pipe Mill 2200
Tak-Final welded Pipe Mill 2540
Tak-Final welded Pipe Mill 56
Tak-Final welded Pipe Mill 56 Inch
Tak-Final welded Pipe Mill 64
Tak-Final welded Pipe Mill 64 Inch
Tak-Final welded Pipe Mill 72
Tak-Final welded Pipe Mill 72 Inch
Tak-Final welded Pipe Mill 80
Tak-Final welded Pipe Mill 80 Inch
Tak-Final welded Pipe Mill 86
Tak-Final welded Pipe Mill 86 Inch
tube Ime Machine
Ji Erw Pipe Mill
ịgbado ọkụ Pipe Machine
ịgbado ọkụ Pipe Production Line